Famerenam-bola amin'ny canon Windows | Avy amin'ny Linux
Bill | | Tutorials / Manuals / Tips
3 Arahana ny dingana: Dingana
4 Fampahalalana ara-dalàna
8 taona lasa izay dia nividy solosaina finday tsy nisy Windows efa nametraka mialoha aho hametrahana GNU / Linux nefa tsy nandoa sarany amin'i Microsoft, na dia mbola mandeha aza io dia efa tsy maintsy nividy solosaina finday vaovao aho. Ny olana dia izao, saika tsy mivarotra solosaina findainy intsony izy ireo, manana marika daholo ary miaraka amina Windows efa napetraka.
Tao amin'ny tranonkala sasantsasany dia hitako fa nisy olona nahazo ny fandoavan-ketra Windows, tamin'ny fomba tsotra niaraka tamin'ny marika Asus: http://rocknlinux.blogspot.com.es/2013/06/devolucion-de-la-licencia-windows.html
Tsy tsinontsinona ny tahiry, 42 euro izy ireo ho an'ny Windows 8 izay miankina amin'ny vidin'ny solosaina finday dia mety hampihena 10%:
Sarany amin'ny laptop ao amin'ny magazay: isan-jato fihenan'ny fihenam-bidy Windows
Laptop laptop 400 euro: 42/400 = 10,5%
Laptop laptop 500 euro: 8,4%
Laptop laptop 600 euro: 7%
Ny fiverenana dia tokony ho an'ireo rehetra nividy solosaina finday vaky ihany koa, afaka mametaka Windows izy ireo amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana alohany raha toa ka tsy OEM (manokana amin'ny solosaina nividianana azy), ary miverina amin'ny Microsoft Windows fahazoan-dàlana amin'ny solosaina vaovao, izay ilain'izy ireo tsotra fotsiny ny mahazo CD fametrahana na USB misy ilay kinovan'ny Windows ananany (mazàna 64-bit Home Edition) mba hidirana ny kaody fahazoan-dàlana.
Na izany na tsy izany dia tsy tokony handrehitra ilay solosaina vaovao izy ireo mba tsy hanaiky ny fifanarahana fahazoan-dàlana niseho voalohany; Satria tsy hita ny bokotra hanafoanana, ny sisa dia ny famonoana ireo fitaovana:
Alohan'ny hirosoana amin'ny famerenana ny fahazoan-dàlana Windows, tsara kokoa ny manamboatra rafitra GNU / Linux amin'ny CD na USB amin'ny maody mivantana hahafahanao mahita raha miasa daholo ny fitaovana (hardware) tsy misy fifanarahana: carte graphique, feo, webcam (webcam ), Mpanonta USB na Wi-Fi, scanner sns. Raha tsy izany dia afaka mamerina ny solosaina ao amin'ny magazay foana izy ireo ao anatin'ny 7 andro manomboka amin'ny datin'ny faktiora.
Arahana ny dingana: Dingana
Araka ny efa nanamarihako, rehefa avy nitady Internet aho dia hitako fa i Asus no iray amin'ireo sakana kely indrindra amin'ny fiverenan'ny Windows, ary nisy izany: taorian'ny mailaka maromaro sy fiandrasana telo herinandro dia efa manana 42 euro ao amin'ny kaontiko aho. . Eto aho dia mamela ireo hafatra, daty ary antontan-taratasy izay nanontaniany ahy tao anatin'izany:
Atombohy amin'ny fandefasana hafatra amin'ny alàlan'ny tranokala Asus: https://vip.asus.com/VIP2/Services/QuestionForm?lang=en-us&_ga=1.125266755.850080518.1425564409#
Ny hafatro tamin'ny 21 aprily 2015 dia (novaina ny angona manokana):
Ampiharo daty: 2015/04/21 17:49:17 (Fotoana UTC) [Fampahalalana mifandraika] anarana: AAAA BBBB barotra
Adiresy mailaka: abcd@abcd.es
Firenena: Espana [Espana] [Fampahalalana momba ny vokatra] Karazan-vokatra: Notebook
Modely amin'ny vokatra: F554LA
Laharana serial: EXX000000XX1
Toerana fividianana: PCBox Córdoba
Datan'ny fividianana: 2015/04/21
Rafitra miasa: Win2008 64bit [Famaritana ny olana] Te-hamerina ny lisansa Windows aho satria hametraka GNU / Linux
Mazava fa tsy azo atao izany, ny valinteniny mandeha ho azy dia tsy naharitra ela tamin'io andro io ihany (21/04/15 19:49 PM) miaraka amina rohy hahita ny valiny ao anatin'ny 48 ora manaraka:
Ry mpampiasa mpampiasa ASUS malala,
Misaotra betsaka noho ny safidinao amin'ny vokatra ASUS.
Ny laharan'ny tranga dia ny WXXX20150422000000000
Nahazo ny mailakao izahay ary manadihady izany. Hiezaka hamaly anao izahay ao anatin'ny fe-potoana maharitra 48 ora (miasa). Ny serivisinay dia misy manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 18 hariva. Raha tsy mahazo valiny ianao ao anatin'io fe-potoana io dia zahao ny boaty ao amin'ny kaontinao ASUS na zahao amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany. Misaotra anao nifandray tamin'ny ASUS Ibérica.
(Azafady mba jereo ny valiny ara-teknikan'izy ireo amin'ny rohy etsy ambony.)
ASUSTeK Customer Service Center
Raha te-hiditra an'ity valiny ity dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny tranokalany ianao (21/04/15 19:53 PM):
Misaotra anao namorona kaonty mpampiasa ASUS. Mba hanamarinana ny fiasan'ny adiresy mailaka omena (abcd@abcd.es), azafady araho ny torolalana etsy ambany:
kitiho eto hamita ny fisoratana anarana
Raha tsy mandeha ilay rohy etsy ambony dia alefaso azafady ary apetaho ao anaty baran'ny adiresy browser ity adiresy tranonkala ity ary fenoy ny fizotran'ny fanamarinana.
Tonga tamiko ny valiny tamin'ny alàlan'ny mailaka ny ampitson'io. Azo antoka fa ny fizotran'ny fahazoan-dàlana manontolo dia azo atomboka mivantana amin'ny fanarahana ireto torolalana ireto:
Ry mpanjifa malala, noho ny fiverenan'ny fahazoan-dàlana Windows, mila mandefa mailaka aminay izahay: acib_callcenter2@asus.com (atoroy ao amin'ny lohahevitra momba ny mailaka ny laharana serial an'ny fitaovanao):
Sarin'ny sticker sticker Windows
Sarin'ilay taratasy fametaka isa nomerao hita ao aorian'ny fitaovana.
Sarin'ilay taratasy fametaka laharana serial hita eo amin'ny karatra fiantohana.
Misaotra anao tamin'ny fifandraisanao tamin'i ASUS Ibérica.
Ireo antontan-taratasy dia nalefa araka ny hita amin'ny sary notarafina: faktiora, antoka miaraka amin'ny laharana serial, sary aoriana misy laharana serial ary sticker Windows 8
Misy mailaka vaovao mampahafantatra ahy ny andro aorian'ny nahazoana ny antontan-taratasy sy ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny sampana mifandraika amin'izany (23/04/15 09:34), miandry aho:
Ry mpanjifa malala,
voarainay tsara ny antontan-taratasy nangatahina, nampita ny serasera tamin'ny sampana mifanitsy aminy izahay.
Hifandray aminao haingana araka izay tratra izahay, raha tsy hoe misy fifandraisana hafa momba an'io.
Ao amin'ity hafatra manaraka ity avy amin'i Asus (23/04/15 11:18 AM), dia nandefa taratasy mivalona roa izy ireo hamenoana sy hanao sonia, ny iray ho an'ny antsipirian'ny banky izay ahazoana ny famindrana ho an'ny fiverenana, ary ny iray ho an'ny fiverenan'ny fahazoan-dàlana mankany amin'i Microsoft; Nanontaniany indray aho ny sarin'ny fiantohana miaraka amin'ny isa serial sy ny faktiora.
Ny antontan-taratasy momba ny fiverenan'ny lisansa Microsoft OS / Office dia miraikitra. Azafady mba vakio tsara ary fenoy ireo takelaka roa miaraka amin'ny fampahalalana takiana ao anatiny.
Raha vantany vao vita sy voamarina dia tsy maintsy alefanao amin'ny alàlan'ny mailaka ireo antontan-taratasy voasonia ireo.Raha manana DVD fanarenana OS ianao dia apetaho ary andefaso amin'ny adiresy voalaza etsy ambany.
Raha misy ny rafitra fiasa Windows 8, alefaso ireo antontan-taratasy fanampiny, notarafina ary nosoniavin'ny solosaina tamin'ny alàlan'ny mailaka.
ASUS Ibérica SL - Att. ASUS TSD
C / Plomo, 5-7, rihana faha-4
Izay fanontaniana azonao atao dia mifandraisa amin'ilay tsipika fanohanana ao amin'ny 902 889 688 na acib_callcenter@asus.com o acib_callcenter2@asus.com
zava-dehibe: -Tsy maintsy alefanao ny antontan-taratasy rehetra vita pirinty ary vita tsara satria raha misy tsy hita na misy vaovao tsy marina dia haverina ireo antontan-taratasy ireo.
-Tadidio koa fa ny anaran'ny faktiora dia tsy maintsy mitovy amin'ilay nampiasaina hamenoana ny endrika.
ASUS Iberian TSD
Ny antontan-taratasy momba ny famindrana banky:
Ary ny taratasy fangatahana famerenam-bola:
Rehefa afaka telo herinandro dia nahazo ilay famindram-bola tamin'ny vola aho, nefa tsy niantso an-tariby:
Farany, ny fivarotana mifatotra dia tsy voarara raha tsy izany, fa voarara ny famerana ny fifaninanana.
Lalàna 15/2007 momba ny fiarovana ny fifaninanana ao amin'ny lahatsoratra voalohany amin'ny fitondran-tena voarara:
1. Voarara ny fifanarahana rehetra, fanapahan-kevitra na tolo-kevitra iraisana, na fanao mifanindran-dàlana na mifanaraka amin'ny fahatsiarovan-tena, izay manana ny tanjony, dia mamokatra na mety hiteraka ny vokan'ny fisorohana, famerana na fanodikodinana fifaninanana amin'ny tsena nasionaly rehetra na ampahany ary, indrindra, ireo izay misy:
d) Ny fampiharana, ao amin'ny fifandraisana ara-barotra na serivisy, miaraka amin'ny fepetra tsy mitovy amin'ny serivisy mitovy amin'izany izay mametraka fatiantoka amin'ny mpifaninana sasany raha oharina amin'ny hafa.
Ary ao amin'ny lahatsoratra faharoa:
Andininy 2. Fanararaotana amin'ny toerana manjaka.
1. Voarara ny fanararaotana manararaotra ataon'ny orinasa iray na maromaro manana ny toerany amin'ny tsena nasionaly rehetra na ampahany.
2. ny ny fanararaotana dia mety misy manokana, amin'ny:
c) Ny fandavana tsy ara-drariny hanomezana fahafaham-po ny fitakiana hividy vokatra na hanome serivisy.
Noho izany, raha tsy avelan'ny Microsoft haverina ny fahazoan-dàlana dia handika izany lalàna izany izy ary ny marika momba ny solosaina izay tsy mamela izany fiverenana izany dia tsy manaraka ihany koa. Na eo aza izany, eo anelanelan'ny fandavana na ny fandavana, mety misy fomba fanao hampiatoana ny mpanjifa, toy ny fanerena anao handefa ny solosaina any amin'ny foiben'izy ireo any Madrid na Barcelona ho azy ireo hamafa ny rafitra miasa, na hanery anao handefa azy ireo antontan-taratasy amin'ny mail voamarina, izay mitaky vola be.
Na izany aza, satria kely izany, ny fitsarana dia tsy misy vidiny ho an'ny mpanjifa, ary kopia telo amin'ny fanambarana an-tsoratra manohitra an'i Microsoft dia azo atolotra ny Fitsarana ambaratonga voalohany.
Na dia manana an'i Asus aza aho dia mamporisika anao hisoroka ny fitsarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Famerenam-bola amin'ny canon Windows
59 hevitra, avelao ny anao
Mahaliana, nefa Dell dia efa ela no nivarotra solosaina finday misy ao amin'ny Ubuntu efa napetraka, ary manomboka amin'ny HP ka hatrany Toshiba dia mivarotra solosaina finday izay tonga tsy misy OS mba hahafahanao mametraka ny distro GNU / Linux izay safidinao.
Tsy haiko hoe hanao ahoana izany any Espana, fa any Perou, ny fivarotana solosaina finday tsy misy Windows efa niorina dia efa zava-misy.
gmolleda dia hoy izy:
Ireo solosaina izay hitako hatramin'izao tamin'ny Dell na marika hafa mamela anao hisafidy tsy misy Windows, dia tsy vitan'ny hoe manangona tahiry amin'ny alàlan'ny tsy fisian'ny Windows fa lafo ihany koa. Rehefa nisy naneho hevitra tao amin'ny bilaogy sasany momba io lohahevitra io, dia nisy vitsivitsy nivoaka izay nilaza fa ny marika dia nandoa ny ampahany tamin'ny solosaina mba hanaovana doka tamin'ny alàlan'ny fitondrana ny rindrambaiko efa napetraka: ohatra, ny antivirus tonga mialoha napetraka dia handoa zavatra iray ho an'ny fitaovana. Na, amin'ny vidiny iray ihany, ny solosaina miaraka amin'ny GNU / Linux dia tapaka tamin'ny fitaovana, ka tsara kokoa ny mividy sy mandoa ny solosaina miaraka amin'ny fahazoan-dàlana Windows na dia nanao format aza ianao taty aoriana.
Mamaly an'i gmolleda
Tsara fa niasa ho anao izy io, na dia somary sarotra aza izany. Manontany tena aho raha misy zavatra toa izany azo tanterahina any Shily ... na dia tsy manana fanantenana firy aza aho.
Farafaharatsiny eto dia mbola mivarotra modely maromaro tsy misy OS na miaraka amin'i Ubuntu i Asus.
Raha ny maodely amidiny anao tsy misy rafitra fandidiana dia manana fitaovana mitovy amin'ilay an'ny Windows (tsy manapaka na inona na inona izy ireo) ary ny fahasamihafana amin'ny vidiny (mora kokoa ilay tsy misy rindrambaiko) dia sahabo ho antsasaky ny fividianana lisansa OEM (rehefa ianao mividiana solosaina birao ary mangataka fahazoan-dàlana Windows izay amidy efa napetraka ao anaty solosaina ianao), avy eo vidio ilay Linux.
Any Espana, rehefa mivarotra solosaina finday tsy misy rafitra fiasa izy ireo na miaraka amin'ny GNU / Linux efa napetraka mialoha, na vitsy ny safidy fitaovana, na lafo be izy ireo.
Vladimir Paulino dia hoy izy:
Raha ny amiko. Talohan'io fepetra io (linux Linux irery ihany). Androany dia miara-monina amin'ny rafitra fiasa aho. Raha ny marina dia nividy ny lisansa Windows 8.1 aho ary nametraka ny rafitra tamin'ny solosainako birao. Sarobidy amiko izany fahazoan-dàlana izany satria mamela ahy hampiasa Windows ara-dalàna. Ankafiziko ny Windows ary hitako fa tena tsara amin'ny famokarana. Manao asa birao aho ary manana fitoviana mifanentana tsara amin'ny hardware sy peripheral rehetra ananako ary afaka mividy i Windows. Mampiasa Linux aho anio amin'ny fiainako an-tranonkala be dia be, azo antoka kokoa, azo itokisana kokoa, ary tena tiako izany.
Faharoa, heveriko fa fifanarahana tena tsara ny fahazoana fahazoan-dàlana Windows ho an'ny € 40. Raha ny amiko, nividy ny fahazoan-dàlana aho tamin'ny $ 92.00 USD ary nitombo efa ho zato dolara izany niaraka tamin'ny fandaniana fanampiny. Ny Windows efa napetraka mialoha amin'ny solosaina finday sy ny birao dia mety ho mora kokoa. Io ihany no azoko eritreretina. Na izany aza, heveriko fa tena ilaina ho an'ny mpampiasa Linux rehetra ny manana fahazoan-dàlana Windows, amin'ny tranga sasany dia mety tsy maintsy ilaina izany.
Valiny tamin'i Vladimir Paulino
Raha mila MS Windows ho an'ny fampiharana sasany amin'ny asanao ianao, ary tsy misy fomba hafa azo soloina kalitao, dia tsara ho anao izany. Fa raha ny filàna fotsiny dia manomboka amin'ny fametrahana ny Administrations Public, dia miharihary fa tsy manan-tsafidy ianao afa-tsy ny mandoa ny lisansa fa tokony hanao taratasy fitarainana amin'ny fitantanan-draharaha ianao mba hanarahan'izy ireo ny fenitra satria mametra ny fifaninanana. Ary ianao, tsy manohitra ny fametahana tsy marina ve ianao?
Izay nolazaiko tamin'ny hafatra nataoko teo aloha: Tsy nijanona ho ultra-Linux intsony aho, mba ho lasa mpampiasa pragmatika sy MAIMAIMPOANA tanteraka. Manana ny fahazoan-dàlana Windows aho, mampiasa iPhone ho toy ny finday aho ary mijery Internet amin'ny solosaiko Linux. Ny tsirairay amin'ireo sehatra ireo dia manome tombony ho ahy amin'ny mpampiasa. Amin'ny fiarovana dia tsy mihoatra ny Linux ny Windows. Amin'ny fampiasana, fitoniana, hafainganana ary kalitao (araka ny hevitro) dia mbola tsy mihoatra ny Apple ny Android. Raha eo amin'ny sehatry ny fampitaovana / rindrambaiko rehefa manamboatra toeram-piasana misy peripheraly maro sy rindrambaiko matihanina manam-pahaizana manokana dia tsy azo ampitahaina amin'izany ny Linux, ary tsy mahatratra ny Windows amin'ny sehatry ny Desktop-OS.
Misy dingana iray izay resy lahatra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Dingana iray izay mahatezitra ny olona iray amin'ireo "fametrahana" ny tsena sy ny rafitra. Dingana iray izay tsy te hampiasa afa-tsy vahaolana maimaim-poana na Open Source ny olona iray, fa miezaka ny hampiasa rindrambaiko maimaim-poana na Open Source fotsiny. Avy eo dia milamina ny iray ary tonga ny tany iray. Raha ny amiko dia sambatra aho fa ilay olona manam-pahalalana amin'ny Unix sy Linux izay nifanena tamiko (olona nampiofanin'i Red Hat) dia olona iray izay mandeha amin'ny solosaina Linux mankany amin'ny solosaina finday Windows 7 tsy misy olana, ary mampiasa ny sehatra roa tsy misy fitsarana an-tendrony, na dia eo aza ny fijaliana lalina ho an'ireo mpamorona Linux.
Raha mijery azy tsara ianao, ary tsy mpandraharaha misy fikambanana miafina, ny fifanakalozana solosaina eo anelanelan'ny sehatra maro samihafa dia ahafahanao miditra amin'ny tsara indrindra amin'ny tsirairay, izay lavitra ny famerana anao dia manitatra ny fahafaha-manao anao amin'ny maha mpampiasa anao. Izany no nataoko. Ny fampiasana Linux irery (tsy mahatsapa tombony ara-toekarena na sosialy matanjaka) dia mametra anao.
Izaho dia pragmatika toa anao ihany, ary ny fampiasana Windows na Mac dia tsy olana amiko raha mila izany. Saingy te-hamela tontolo tsara kokoa ho an'ny taranaka ho avy aho, izany no hany zavatra mampiavaka ahy aminao dia ny mametraka ny taratasy fitoriana na tolo-kevitra rehefa misy zavatra ratsy kokoa apetraka amintsika. Ny fitantanan-draharaham-panjakana dia tsy maintsy miandany, mazava ho azy fa raha tsy izany no ampiasako amiko, fa manohitra aho. Raha tsy nanao hetsi-panoherana fotsiny aho dia nanao fihetsiketsehana ny rehetra, niova ho tsara ho an'izao tontolo izao kosa ity tontolo ity. Fihetsiketsehana anio, ny famenoana ny takelaka amin'ny Internet dia tsy andoavany 5 minitra amin'ny fotoanao. Tsy toerana mifanentana izy ireo: pragmatism ary miady amin'ny tontolo tsaratsara kokoa.
Azo antoka fa mbola tsy nanandrana ny Android Lollipop tamin'ny Nexus 5 na 6. Notsapaiko tamin'ny Galaxy 6 Edge vaovao izany, ary raha mijery ny masontsivana HW ianao raha oharina amin'ny Nexus 5 dia tsy tsara toa ny Nexus 5 ny rafitra. .
laper dia hoy izy:
ENY, mora kokoa ny tsy mitsara etika momba zavatra. Mora kokoa ny tsy mieritreritra famonoana olona, ​​ady, fanandevozana, fahalotoan'ny tontolo iainana na tsy fitoviana ara-toekarena. Amin'ny faran'ny andro dia toy izany ny fiainana ary tsy hisy hiova, aleo mitazona ny fampiononako, tsotra kokoa (maneso).
Etsy ankilany, tsy mampitaha ny fahalalahana misafidy amin'ny fahalalahan'ny rindrambaiko ianao, satria samy hafa ny toe-piainany.
Mamaly an'i laper
Izy io dia mora kokoa noho ny crapware an-trano. Andao ho tanjona: Birao, mifandray amin'i RedHat? tsy mila mitantana solosaina, vondrona na mpampiasa tambajotra izy io, ary tsy tafiditra ao koa ny fahafahan'ny domain. Manantena aho fa haverina eto amin'ny fireneko ny mitovy amin'ny 40 euro. Ny sasany amintsika dia afaka mahazo fahazoan-dàlana ho an'ny oniversite na asa. Na i Microsoft aza manome fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny MSDNAA / Dreamspark raha manana tetikasa ho an'ny teknolojian'izy ireo ianao.
Coco dia hoy izy:
Vao nividy solosaina findainy ny rahalahiko ary ny marika mitondra azy dia nilaza fa voamarina ho an'ny linpus linux izany dia nitentina 1.200.000 pesos Kolombiana ary noheveriko fa mora izany satria noho ireo toetra entiny dia mitentina mihoatra ny 1.600.000 ny vidiny satria fotony io. i5 Taranaka fahadimy 8 gb ram ary disk iray iray mazava ho azy fa nasainy nametraka windows 7 daholo izy, eto Kolombia dia misy fivarotana manolotra solosaina misy linux na misy windows toa ity ohatra.
Mamaly an'i coco
Tsara tokoa ianao mizara ny zavatra niainanao, ary antenaina fa ity fijoroana ho vavolombelona ity dia hampitsahatra ireo hevitra diso izay tsy azo atao ny mitaky ny tsy hivarotan'izy ireo anay an-keriny zavatra izay tsy angatahinay, ary raha esorinao ny Windows ny solosainao very antoka.
Torohevitra fanampiny fanampiny izay afaka mamonjy dingana vitsivitsy dia ny mifandray amin'ny orinasa alohan'ny hanaovana ny fividianana sy mividy amin'ireo orinasa izay manana solontena mivantana ao an-tanànanao.
Miarahaba ny mpanoratra ny lahatsoratra.
Salama, tokony ho fantatrao fa tsy ara-dalàna ny mivarotra vokatra mifandraika amin'ny hafa na dia tsy mangataka izany aza ianao, raha mividy fanekena ianao dia tsy maintsy miaritra izany. Ny olana eto dia ny fampitovizan'ny orinasa rehetra eny an-tsena anao amin'ny vokatra mitovy amin'izany ary tsy afaka misafidy hafa ianao. Na dia eto Espana aza dia misy sehatra voafetra manokana izay voarara ny fivarotana vokatra sasany: ny fametrahana fiantohana an-trano amin'ny banky iray izay angatahanao ny trosa, ny fametrahana trano fandevenana manokana ao an-tanàna ho an'ny fiantohana fandevenana anao.
Mieritreritra aho fa tsy nanazava tsara. Rehefa miteny aho hoe: "amidio amin'ny herin'ny zavatra tsy angatahintsika" ny tiako holazaina dia amidiny aminao izy ireo na dia tsy ekenao aza, raha ekenao izany dia tsy an-tery intsony.
Azoko tsara ianao, hazavako izany mba hialana amin'ny tsy fahazoan-kevitra amin'ny mpamaky ho avy.
Piero dia hoy izy:
Te hiarahaba anao aho ary misaotra anao ihany koa tamin'ny fizarana ity fampahalalana ity, tsy azoko an-tsaina hoe mety hisy izany. Ny fahafantarana ny zontsika dia fomba iray hanafahana, ho an'ireo any an-tampony izay tsy dia manam-paharoa firy amin'izy ireo dia olona ampianarina, izany no manome hery antsika.
Gaga be aho tamin'ny fanehoan-kevitra, toa tsy isika rehetra no mahatakatra izany ho filozofia ho an'ny kalitaon'ny fiainana tsaratsara kokoa na firy na firy na firy ianao.
Mamaly an'i piero
Marina, ny ankamaroan'izy ireo dia toy izany, manaiky izy ireo fa mitarika ny lalana tsy am-pisalasalana. Azoko tsara fa amin'ny fametrahana ny fividianana fahazoan-dàlana hahafahanao miara-miasa amin'ny Fitantanana na eo amin'ny tsena, dia tsy manan-tsafidy ianao; Fa arovy izany fividianana izany fa tsy tezitra sy manao hetsi-panoherana fanoherana tsy mitombina tanteraka, tsia. Saingy misy maro hafa izay eken'ny ankamaroan'ny ankamaroany ary na dia arovany aza: fametrahana ny teny anglisy ho fiteny iraisam-pirenena fa tsy hampiasa Esperanto (jereo ny tatitra Grin - Profesora momba ny toekarena amin'ny fiteny - momba ny tahiry ara-toekarena izay entin'i Esperanto any amin'ny UE ihany: 25000 miliara euro isan-taona). Ny olombelona dia biby mpiangona izay manana fahazarana raikitra.
Roberto Mejia dia hoy izy:
Raha tany El Salvador no nahavitana izany dia tsara izany, fa raha te-hanova ny SO ianao amin'ny fomba ofisialy
Valiny tamin'i Roberto Mejia
cabeza dia hoy izy:
FANONTANIANA MAHAY: Manome antoka anao ho an'ny solosainao finday ve ny ASUS amin'ny alàlan'ny fametrahana rafitra miasa hafa ankoatry ny Microsoft Windows?
Tena mahaliana, misaotra amin'ny lahatsoratra.
Andao hojerentsika, tsy misy olona afaka manaisotra ny fiantohana fitaovana entinao hanovana ny rindrambaiko raha mbola tsy ilay rindrambaiko no misy fiantraikany amin'ny fitaovana. Ny zava-mitranga dia mila mahafantatra tsara ianao mba hahafahanao manamarina fa raha misy zavatra tsy mahomby dia tena hadisoan'ny fitaovana fa tsy hoe tsy mandeha tsara ny logiciel misy anao: ohatra, raha tsy mandeha ny webcam, dia tsy izany lesoka ny mpamily fa tena webcam. Ny zavatra iray hafa dia any Eropa dia maharitra mandritra ny 6 volana ny fiantohana ataon'ny mpanamboatra (mihevitra fa ny famokarana no lesoka), ary mihoatra ny 6 volana amin'ny fotokevitra dia heverina fa an'ny mpanjifa izany raha tsy hoe manaporofo izany izy. Ka raha manova ny rafitra ianao ary miato ny sasany amin'ireo fitaovana enti-miasa ao anatin'ny 6 volana ary fantatrao fa olan'ny fitaovana io fa tsy olan'ny rindrambaiko, dia miorim-paka tanteraka ilay antoka.
mykeura dia hoy izy:
Mahaliana tokoa ny mahita ny dingana narahinao hamerenana ny fahazoan-dàlana Windows.
Raha ho ahy, ny laptop-ko dia tonga miaraka amin'ny Windows 7 efa napetraka. Saingy rehefa afaka kelikely dia novako ho fizarana GNU / Linux izany. Eny, raha ny marina aho dia aleoko ilay distro hiara-miasa amiko isan'andro. Ho an'ny rafitra miasa izay tsy nampiasaiko hatry ny ela.
Valio i mykeura
Lahatsoratra mahaliana ary tena ilaina. Izaho koa dia mieritreritra ny hividy solosaina finday ASUS hametraka ny birao misy ahy. Azonao atao ve ny manome hevitra na manoratra andian-dahatsoratra momba izay anananao, izay napetrakao ary ny fomba fitondrantenany? Misaotra indrindra anao.
Tsy ilaina izany, nampiasa ny GNU / Linux aho nandritra ny 15 taona ary ho an'ny asako amin'ny maha-mpampianatra ahy dia tsy mila zavatra firy aho: karatra sary intel mba hialana amin'ny fifanarahana amin'ireo mpamily tompona avy amin'ny ATI na Nvidia, ho an'ny fampisehoana an-dakilasy ampiasaiko ny LibreOffice. Mampiaiky. Ampitaiko amin'ny fampisehoana PDF izy ireo miaraka amin'ny plugin ExpandAnimations izay nasiako fiasa hamaranana ny famahana lesoka (https://raw.github.com/gmolledaj/ExpandAnimations/master/dist/ExpandAnimations-0.5.oxt), izao dia mbola tsara kokoa noho ny PowePoint satria ny endrika PDF no manerantany sy mifanentana indrindra amin'ireo programa sy kinova. Nametraka ireo tsiro Ubuntu telo aho (Ubuntu sy Kubuntu hampianatra azy ireo sy ny Lubuntu satria ho ahy izao dia izao no tsara indrindra hiaraha-miasa). Izy io dia manana processeur Intel vita amin'ny U (cores roa, tsy manan-kery amin'ny herin'ny lalao na sary 3D) fa i7 kosa, tsy tiako ny fampidirana ny bateria (tsy azo esorina) dia toa vita amin'ny polymers io. maharitra kokoa na dia tsy esorina aza, ho hitantsika eo. Ary tsy dia manify loatra ny tariby mpanova ary ny transformer dia mifandray mivantana amin'ny plug (tsy manana tariby iray hafa avy amin'ny plug mankany amin'ny transformer izy io, ka manahirana ny mampifandray raha toa ka misy tariby maromaro tafiditra ao.
Mpampianatra ihany koa aho ary ao an-dakilasy dia mifandray amin'ny mpanara-maso ny Lubuntu 14.04 foana aho. Mampiasa aRandr aho hanitarana ny monitor. Nandritra ny roa taona, ny presenter-console dia tsy niasa ho ahy tao Lubuntu (mandeha amin'ny * buntus hafa ary koa amin'ny LXDE hafa toa PCLinuxOS). Mbola tsy mandeha amiko io volana vitsivitsy lasa izay, satria nanomboka tamin'izay dia mbola tsy nanandrana azy indray aho, ary ankehitriny tsy manana ny solosaina miaraka amiko hizaha toetra. Azonao lazaina amiko ve raha mety aminao? Ny mety amiko dia ny PDF-presenter-console, fa tsy ny LibreOffice-presenter-console.
Valiny tamin'i Pedruchini
Mbola tsy nanandrana ny efijery roa na nitarina aho, ao an-dakilasy dia efa misy solosaina misy WinXP mifandray amin'ilay projector. Izany no antony nilazako hoe tsara ny manova ny fampisehoanao ny PDF ho PDF izay toa fampisehoana amin'ny efijery feno. Ho hitako rahampitso fa manana kilasy aho raha afaka mampifandray azy amin'ilay projecteur ary ho hitako ny fandehany. Izay lazainao amiko dia toa tsy fitoviana manokana, angamba miaraka amin'ny kernel iray ary io no ananan'ny Ubuntu anao, ary angamba lesoka iray izay tsy misy afa-tsy amin'ny maodelin'ny karatra sary, ny ahy dia intel HD 4400. Hiezaka aho rahampitso.
Ao amin'ny Lubuntu, ny efijery roa dia miasa tsara ho ahy amin'ny fanaraha-maso faharoa, mampihetsika azy miaraka amin'ny programa fisakafoanana Preferensi - Monitor Settings.
Ny olana dia miseho cloned izy ireo, mitovy ny fahitanao azy roa. Raha hitanao fa tsy tsara ny iray amin'izy roa dia azonao atao ny manova ny vahaolana, fa tsy manitatra ny birao.
Ny vahaolana hametrahana ny birao lava dia ny fametrahana ny programa arandr, manazava azy tsara izy ireo ary efa nohamariniko tao:
Izaho koa nividy solosaina finday ASUS iray volana lasa izay saingy satria efa nandany ny vola aho dia tsy raharahako. Naharitra roa andro latsaka ny Windows tamin'ny solosaina fa ny Windows dia namboariko ho USB sao misy izany. Tsy tiako ny manana OS roa amin'ny solosaina iray ihany, nanandrana azy ireo koa aho ary nihaino bebe kokoa ireo mpankafy.
lector dia hoy izy:
Raha te-hametraka backup amin'ny windows USB dia firy fahatsiarovana GB no mila USB? Te-hametraka linux amin'ny milina lehibe aho, tsy tiako ny manana rafitra roa napetraka miaraka amin'ny solosaina finday, ary raha sanatria manome tranga ny tranga iray ... mila manao an'io backup io aho.
Mamaly an'i Reader
Ny fandaniana vola be toy izany amin'ny fividianana solosaina sy ny famerenana ny fahazoan-dàlana Windows hamonjy anao 40 na 50 dôlara, dia toa tsy ny vahaolana mety indrindra amiko. Satria efa nandany vola be aho, ny zavatra tsara indrindra azoko natao dia ny naka ny Windows sy nanaiky ny fametrahana azy, na dia tsy nety. Ny ratsy indrindra dia tonga taty aoriana ary tsy inona izany fa ny olana apetraky ny olona Windows amin'ny masinin'izy ireo (masinina izay notsapaina manokana ho an'ny Windows ny fitaovany, manimba ny GNU / Linux) ho an'ny mpampiasa mahazatra ary mety ho hitanao daholo karazana sakana sy fahasarotana amin'ny fametrahana izay rafitra tadiavinao amin'ny solosainao.
Heveriko fa ny zavatra tsara indrindra, farafaharatsiny amiko, dia ny mividy solosaina izay efa napetraka ho toy ny GNU / Linux antsoina hoe Ubuntu na Linux hafa ny rafitr'izy ireo.
Tsy ny fananana vola bebe kokoa na kely akory, fa ny fampiharana ny fahalalahan'ny mpanjifa, satria ilay tokony hanapa-kevitra fa izaho, fa tsy hametraka orinasa amiko. Izay lazainao momba ny fividianana solosaina finday mivantana miaraka amin'ny GNU / Linux dia tena tsara raha nisy izany tany Espana, raha afaka miteny amiko fivarotana iray any Córdoba (Espana) ianao hividy bebe kokoa na iray aza izay novidiko, ary avy amin'ny marika inona no Hamarino tsara fa tsy hisy ny ampahany amin'ny ho avy, ataoko ao an-tsaina izany ho an'ny manaraka. Antenaiko fa tsy misy io (farafaharatsiny eto).
Eny, tsy marina ny anao, fa tsy maintsy tadidinao fa miaina ao anaty rafitra kapitalista isika, izay ny voalohany dia ny vola fa tsy ny filan'ny mpampiasa. Eto aho, amin'izao fotoana izao, manova avy amin'ny PC clone aho. Novidiko manokana ny fitaovana rehetra, ary rehefa tafapetraka tamin'ny vata vy daholo ny zava-drehetra dia napetrako ny GNU / Linux tadiaviko ary eo izy mijery ny fandehan'ny fotoana. Nomeko ny fahafinaretana ny tenako, raha ny fahafinaretana, dia tsipihiko izany, amin'ny fanomezana ilay taratasy fahazoan-dàlana ho an'i Dadatoa Bill, noho ny antony maro izay tsy tokony haneho hevitra ankehitriny. Amin'ny ho avy lavitra na lavitra dia mbola hanao toy izany koa aho.
Mikasika ny solosaina finday dia tsy dia misy tolotra firy miaraka amin'ny rafitra GNU / Linux napetraka, saingy misy ny sasany. Raharaha mitady ny tsena io.
Tsy tokony hikaroka ny tsena iray manontolo ianao, tsy maintsy mitady ny tsena eo an-toerana ianao, ny fivarotana ao an-tanànanao, holazaiko anao ny antony: mandritra ny fiantohana raha vaky noho ny tsy fahombiazan'ny orinasa, ao amin'ny EU ianao dia mila mitondra ny solosaina mankany ny mpivarotra sy ny mpivarotra dia manana adidy hitondra izany any amin'ny mpanamboatra. Raha mividy solosaina any amin'ny tanàna hafa na an-tserasera ianao, raha mila mampiasa ny antoka, dia ataonao ny vidin'ny fitaterana ary lafo izany. Izay no antony ividianako zavatra lafo ao amin'ny magazay. Ny eritreritra rehetra.
Tena tsy nahalala an'ity trangan-javatra ity aho, tiako ny mamaky traikefa iray an'ny mpiray tanindrazana amiko (Arzantina) miaraka amina marika hafa. Mampalahelo fa tsy hitako teo aloha, hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay dia nividy kahie Asus aho information Vaovao tsara 😉
mcanthony dia hoy izy:
Dell dia iray amin'ireo mpamatsy vola lehibe indrindra an'ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny Ubuntu, ary vao namoaka solosaina finday vaovao antsoina hoe Inspiron 15 3000 Series Laptop Ubuntu Edition ny orinasa.
Ny orinasa toa an'i Dell na IBM dia nanampy tamin'ny fanaovana malaza kokoa an'i Ubuntu satria mivarotra fitaovana marobe izy ireo, ary mandefa izany fitaovana izany amin'ny alàlan'ny Ubuntu efa napetraka. Mety tsy ho olana lehibe izany. Rehefa dinihina tokoa, dia afaka mametraka zavatra hafa foana ianao, fa maro kosa ny mpanjifa tsy mifindra amin'ny OS hafa ary mbola mijanona ny Ubuntu.
Izy io koa dia manampy ny zava-misy fa i Dell, na eo aza ny anarany lehibe, dia mbola manana laptop sy netbook mora vidy ihany. Satria mandefa miaraka amin'ny Ubuntu izy ireo fa tsy Windows dia ambany ny vidin'ny fitaovana, ka mahatonga ireo kinova ireo ho safidy tena tsara.
Inspiron 15 3000 dia tsy herinaratra
Misy antony tena tsara Inspiron 15 3000 dia solosaina finday mora vidy kokoa. Manomboka amin'ny $ 250 (€ 224) ny vidiny, saingy miakatra izy io rehefa manova ny fikirakirana fitaovana ianao. Raha mila zavatra amin'ny birao sy Internet fotsiny ianao, dia tsy ho diso fanantenana amin'ny valiny.
Ny fikirakirana mora vidy indrindra dia misy Intel Celeron® Processor (Dual Core), RAM 4GB, ary HDD 500GB. Amin'ny lafiny hafa amin'ny spectrum, manana Intel Pentium Processor (Quad Core), 4GB RAM, 500GB HDD, ary warranty roa taona (fa tsy iray). Ity kinova ity dia mitentina 350 $ (313 €). Tsara ihany koa ny manamarika fa ny kinova rehetra dia misy fampisehoana Truelife LED-Backlit HD 15.6-inch (1366 x 768).
«Raiso tsara izay tadiavinao amin'ny Ubuntu 14.04 LTS, ilay OS malaza anisan'izany ny Google Chrome browser, dimy taona fiarovana maimaimpoana sy fanavaozana ny fikojakojana. Ny Laptop Dell Inspiron 15 3000 Series dia miaraka amina processeur farany indrindra avy amin'ny Intel, miaraka amina fahombiazana mamaly ho an'ny asanao rehetra amin'ny fivezivezena amin'ny Internet, ny fanoratana taratasy, ny fanitsiana horonantsary na ny fifampiresahana amin'ny Internet, »hoy ny valan'ny tranonkala ofisialy.
Ny antsipiriany bebe kokoa momba ny andian-dahatsoratra Inspiron 15 3000 dia hita ao amin'ny tranonkala.
Mamaly an'i mcanthony
Ny traikefa izay navoakanao dia tena tsara, 20 andro mahery lasa izay dia nahazo solosaina «asus» izay misy windows aho, hoy ny mpivarotra fa ... tsy manome ny fonosana nomen'ny «mpamily» ireo mpanamboatra ary koa CD nomaniny ho solon'izay fikandrana, hametahana azy rehetra ny sticker "Produ Key" dia tsy miraikitra amin'ny faritra ara-batana amin'ny solosaina fa ny "logo karazana windows" ihany no hita. Fa maninona no ity? Araka ny voalazan'ny mpivarotra ... milaza izy roa fa na ny mpamily na ny fikandrana amin'ny windows dia efa tafiditra ao anaty fitaovana, izany hoe ... ao anaty "backup" raha vao tsy mandeha ny fitaovana dia afaka misafidy an'izay izy ireo " backup "manager" ary apetaho indray ny rafitra fa tsy mila mangataka ny "SERIAL", mijanona ho default amin'ny orinasa.
Ny nataonao ... dia sarotra be eto (Espana), satria efa mihoatra ny 21 andro no nahazoany, ary mino aho fa azo averina ireo fitaovana ireo. Atsaharo ny bootre azo antoka UEFI, afaka nanandrana Linux Mint Live ISO aho, ary mandeha tsara ny zava-drehetra, saingy rehefa manandrana ny "serivisy fampifandraisana tamba-jotra tsy misy tariby" dia tsy mahita ny fitaovana rehetra, noho izany dia mbola mijanona tsy mametraka linux amin'ny lehibe indrindra aho. milina. Ny zavatra ratsy momba ny varavarankely dia izy rehetra mametra azy ireo amin'ny fampiasana ny rafitr'izy ireo (windows) nefa tsy afaka manao configurement sahaza azy, amin'ny filazanao aminao fa na mailaka na rohy mankany amin'ny pejy (youtube) dia tsy mamela anao sokafy amin'ny "firefox" sy ireo fandaharana marobe momba ny dokambarotra izay tonga fenitra napetraka ao amin'ilay "backup" an'ny masinina, misy torohevitra azonao omena ahy ?.
Ny tsy fahatongavan'izy ireo miaraka amin'ny CD / DVD dia tsara kokoa satria amin'izay dia mora kokoa ny mamerina ny fahazoan-dàlana, raha miaraka amin'ireo CD / DVD ireo fitaovana dia tsy maintsy alefantsika amin'ny alàlan'ny mailaka voamarina izy ireo ary hitondra ny vidiny.
Ao amin'ny Windows 8 dia tsy misy sticker ao ambadika, ka raha tsy manao backup ianao ary tapaka ny kapila mafy dia tsy afaka mametaka azy ianao. Hatramin'izao, raha misintona ny DVD Windows XP / Vista / 7 Home Premium amin'ny Internet ianao dia azonao apetraka amin'ny alalàn'ny tenanao manokana ary alefaso izany. Na izany aza, misy programa milaza aminao ny fahazoan-dàlan'ny Windows napetraka: produkey.
Raha te hamerina ny fahazoan-dàlana Windows ianao dia zava-dehibe ny hahafantaranao fa tsy tokony hampihetsika azy ianao, raha ny tena izy dia tsy tokony nanaiky ny fahazoan-dàlana na niditra Windows ianao tamin'ny fotoana rehetra, saingy heveriko fa raha tsy nampihetsika an'io olona io ianao mahalala. Raha mbola tsy navadibadinao ilay izy ary tadiavinao ny hamerina azy dia andramo manoratra amin'ny mailaka nomeko ireo dingana miverina, alefaso ny sarin'ny nomeraon-telefaona anao, mividy tapakila na faktiora ary taratasy fiantohana ary miandrasa hahita izay lazainy aminao.
Mikasika ny famerenana ny fahazoan-dàlana na ny fitaovana feno, ny lalàna ao amin'ny UE dia manome anao ny zana hanao 7 andro fotsiny, tsy fantatro raha 15 fa heveriko fa tsia. Na dia miankina amin'ny magazay ihany koa izy io ary raha mbola averinao tsy ampandehanana Windows sy tsy nampiasanao azy (raha nanao backup ianao ary mamerina ny zava-drehetra ho orinasa).
Misaotra ny valiny gmolleda.
…. Misy programa milaza aminao ny fahazoan-dàlan'ny Windows napetraka: produkey?
Inona ireo programa tsy misy fitaovana spyware hahafantarana hoe iza ny «Produ Key» an'ny windows 8.1? Izy io dia miaraka amin'ireo programa Windows 8 ... tsy miseho amin'ny windows 8.1 izany ary lesoka fotsiny no miseho.
Rehefa namoaka ny fitaovana tao an-trano aho dia efa navadika ny varavarankely, satria ny rojom-barotra lehibe dia nametraka fitaovana vaovao iray na iray hafa ho an'ny fampisehoana ampahibemaso, araka ny nolazaiko teo aloha, mihoatra ny 21 andro no nahazoako ireo fitaovana ireo ary miahiahy aho fa azo averina.
…… .Raha efa nanao backup ianao ary naverinao ho orinasa avokoa?
Fa maninona aho no tokony hanao copie backup?…. Raha toa ny solo-saina voalaza fa manana "backup manager" mahazatra ho backup ary miverina ho orinasa avokoa ny zava-drehetra dia tsy azoko hoe maninona izy ireo no miziriziry manao kopia backup hafa ho backup. .
Ny fanontaniako dia hoe mampiasa rafitra Linux ve ianao ary ahoana no anaovanao izany hamahana ny fitantanana tamba-jotra tsy misy tariby? Raha manana torohevitra hafa ianao, azonao omena ahy ve, tsy haiko ny mahazo CD windows 8.1 hanaovana a fametrahana madio ary esory ny habetsaky ny programa fanaovana dokambarotra napetraka amin'ny fomba mahazatra ao amin'ilay backup, ary hahavita izany… .Raha sendra tafapetraka ny solosaina miaraka amin'ny rafitra linux… dia tsy hita ny fitaovana fototra.
Raha manana spyware izy ireo na tsia, tsy azonao atao ny mahafantatra raha tsy omeny anao ny kaody loharano ary manangona izany ny tenanao (tsy maintsy rindrambaiko maimaimpoana ho azy io) ary hainao koa ny mamaky azy io (hainao ny mamolavola programa) . Ny zavatra voalohany dia ny tsy misintona avy amin'ny softonic na tranokala toy izany, mandehana mivantana amin'ireo mpamorona: http://www.nirsoft.net/x64_download_package.html
Tsy haiko raha miasa amin'ny windows 8, amin'ny 7 eny, fa tsy manana windows 8 aho na aiza na aiza, naveriko nefa tsy nampiasaiko.
Tsy azoko lazaina aminao ny momba ny kopia nomaniny ho solon'izay, ho fantatry ny tsirairay izay ananany sy izay efa ananany ao amin'ny tranokala iray hafa.
Ao amin'ny linux dia tsy nanana olana tamin'ny wifi-ko aho, ity no voalohany. Zava-dehibe alohan'ny hampiasana linux dia manandrana manamboatra boot miaraka amina pendrive amin'ny maody mivantana ianao mba hitsapana raha mandeha daholo ny fitaovanao (farafaharatsiny ireo zava-dehibe toy ny feo, sary ary wifi).
Ao amin'ny CD Windows 8 manontany an'i Microsoft, tokony hanatrika anao izy ireo aorian'ny handoavana anao 42 euro, tsy manana Windows 8. Ao amin'ny Linux aho, ny zavatra voalohany dia ny manomboka amin'ny maody mivantana, tsy mametraka azy, mba hahafahanao mahafantatra raha mandeha ny fitaovana alohan'ny famafana ny windows. Azonao atao ihany koa ny mampihena ny fizarazaran'i Windows amin'ny Windows mihitsy (anontanio ny Microsoft fa tsy fantatro) ary apetraho amin'ny làlana roa ny linux. Soso-kevitra iray ny olona iray fantatrao izay mahalala momba ny fizarazaranna sy ny hafa ny fametrahana satria afaka mamafa ny fampahalalana rehetra ianao ary hahavery tanteraka ny windows.
Sam burgos dia hoy izy:
Tsara tokoa ianao noho izany toe-javatra izany, nanontany mpamatsy maro aho amin'ny fireneko ary ny marina dia nilaza tamiko ny REHETRA fa tsy misy olana amin'ny fametrahana Linux satria tsy rafitra piraty izany. FA nolazain'izy ireo tamiko fa noho ny antony fiantohana miaraka amin'ny mpamatsy raha te hanampy ahy aho dia tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny SISTEM OPERATING efa napetraka ary tsy hafa izany. Tahaka ny any amin'ny fireneko dia tsy mivarotra solosaina finday generika sy ireo manana marika fanta-daza izy ireo, efa fantatr'izy ireo ny tranga, tsy manana safidy hafa aho raha tsy ny hanana boot roa na maka risika ary manaisotra ny zava-drehetra ary hamoy ny fiantohana mandritra izany. ; Ho hitako izay ataoko rehefa miseho indray ny toe-javatra
(miala tsiny amin'ireo lesoka, te-hanasongadina izany aho)
Valiny tamin'i Sam Burgos
Ireo mpamatsy dia tsy manampy, manara-dalàna. Raha tapaka avy any amin'ny orinasa ny fitaovanao, na inona na inona rindrambaiko anananao dia tsy maintsy manamboatra ireo fitaovana ireo izy ireo. Raha tapaka eo ambany fiantohana ny DVD sy ny memoarako RAM, dia esoriko ilay kapila mafy ary apetrako ny solosaina, miteny aho fa ny rakitra dia misy angona manokana izay tsy kasaiko zaraina ary manan-jo hanana fiainana manokana aho. Nilamina ny olana, tsy fantatr'izy ireo izay rafitra ananako ao anaty kapila misy ahy. Na izany na tsy izany, raha omenao ny kapila izy ireo dia azo antoka fa hamafana izany, ka aleo tsy omenao azy ireo.
Misaotra anao fotsiny tamin'ny fitanisanao ny bilaogiko ho loharano ao amin'ny lahatsoratranao.
Miarahaba, misaotra, ary miarahaba anao naharesy koa ity 'ady' ity.
Misaotra anao aho, misotro anao aho noho ny nanomezanao ny làlan'ny orinasa mamerina ny vola tsy misy olana lehibe.
Salama Nangataka ny famerenana ny fahazoan-dàlana aho, toa anao ihany, saingy hoy izy ireo tamiko tao amin'ny foibe fiantsoana hoe tsy maintsy ampandehiko winodws aloha ary makà pikantsarin'ny My System handefasako azy ireo.
Mety ho ara-dalàna ve izany?
Namaky ny lahatsoratrao sy ny hafa aho momba an'io lohahevitra io ihany, ary tsy misy angatahina hanaiky lisansa izay TSY tadiavin'izy ireo.
Tsy hitako izay hatao.
Tena nilaza izany tamiko izy ireo.
Mampahafantatra anao izahay fa manana 30 andro hatramin'ny datin'ny fividianana ianao hangataka ny famerenana ny fahazoan-dàlana ary ny rafitra fandidiana dia tokony hahetsika.
Ianao dia mila mandefa anay ny sarin'ny lakilen'ny System Properties sy ny sarin'ny laharana serial amin'ny taratasy fanamarinana.
Nametraka kapila SSD miaraka amin'ny Ubuntu aho ary ny zavatra rehetra dia avy amin'i reny.
Fa izao hamongorana ny kapila indray, apetraho ilay voalohany, ampandehano ny windows, sns. Fanaintainana eo amin'ny hatoka izany, satria ity solosaina finday ity dia iray amin'ireo tsy maintsy esorinao ny zava-drehetra hidirana ao amin'ilay kapila.
Aza mieritreritra ny hampihetsika azy akory, raha ekenao izany dia tsy haverinao.
Aza miantso an-telefaona, maro amin'ireo izay amin'ny telefaona no tsy mahalala ary mampikorontana anao izy ireo, ary satria tsy misy na inona na inona an-tsoratra dia manasa tanana izy ireo. Ary na dia tsy voasasa aza izy ireo dia tsy misy mamerina na inona na inona.
Soraty mivantana araka ny nolazaiko tao amin'ilay lahatsoratra (ireo lesoka tamin'ny tsipelina noho ny tsy fahampian'ny lantom-peony amin'ny isa dia avy amin'ny mailaka Asus izay adika sy apetako toy izao):
Azo antoka fa ny fizotran'ny fahazoan-dàlana manontolo dia azo atomboka mivantana amin'ny fanarahana ireto torolalana ireto:
Ry mpanjifa malala, amin'ny fiverenan'ny fahazoan-dàlana Windows, mila mandefa mailaka aminay izahay: acib_callcenter2@asus.com(farito ao amin'ny lohahevitry ny mailaka ny laharana serial an'ny fitaovanao):
Raha sanatria, alefaso aminy ny sary sy ny mailaka latsaky ny 7 andro satria io no fotoana fiverenana araka ny lalàna. Ny 30 andro ho an'ny fiverenana dia miankina amin'ny orinasa tsirairay avy, aza matoky, ataovy ao anatin'ny 7 andro farafaharatsiny raha sanatria.
ohlife1 dia hoy izy:
Nampihetsika azy aho ary raha ny tokony ho izy dia tsy maintsy mampiditra ny vola fotsiny izy ireo, nanoratra mailaka aho ary niantso ary ho an'ny windows 8 dia io no hany fomba satria tsy manana sticker.
Valiny amin'ny ohlife1
Naveriko ihany koa ny Windows 8, tsy mila nanaiky fahazoan-dàlana aho ary nandefa fotsiny ireo sary izay nanehoako hevitra tao amin'ilay lahatsoratra, ny taratasy fiantohana ary ny ao ambadiky ny solosaina. Ankehitriny ianao dia eo am-pelatanan'izy ireo bebe kokoa satria nanaiky ny fahazoan-dàlana ianao, fa raha efa nandefa torolàlana ho anao izy ireo amin'ny fandefasana mailaka satria manana porofo ianao ary mbola hiandry anao hatrany aho, amin'ny fahavaratra dia mihisatra ny asan'ny orinasa rehetra, alao sary an-tsaina fa resaka vola no resahina ary tsy hafahafa raha olona manokana no manao sonia ny famindrana ary raha miala sasatra izy dia ny zavatra lojika dia mila 1 volana fanampiny ianao: amin'ny totalin'ny 1 volana sy 3 herinandro , ary bebe kokoa satria miangona ny asan'io volana io ary avy eo dia tsy maintsy omenao tsikelikely amin'ny fandaharam-potoana mitovy amin'izany. Faharetana. Total, raha manana ny solosainao amin'ny linux sy mandeha ianao.
Mbola miandry ny 42 euro avy amin'ny ASUS aho, nataon'izy ireo nanaiky ny fahazoan-dàlana aho ary toa tsy maika izy ireo, saingy farafaharatsiny nilazan'izy ireo tamiko fa marina ny zava-drehetra
Tamin'ny farany dia tsy nanaiky ny fahazoan-dàlana aho. Napetrako teo an-tsisiny ary nalefan'izy ireo tamiko ireo endrika roa. Nandefa azy ireo ny ampitso, ary izao…. miandry. Heveriko fa efa 3 herinandro mahery izao ary tsy naverin'izy ireo ny volako.
Ho hitantsika eo ny niafarany.
Tsy mila mametraka sisiny ianao, satria eo an-tanan'izy ireo ianao ary tsy manampy na inona na inona izany. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manazava tsara izay tianao hatao, ary mifototra amin'ny fitsipika ankehitriny dia lazao azy ireo fa tsy voatery hanaiky ny fepetra Microsoft ianao amin'ny fividianana solosaina, fa tsy mila ny vokatra MS Windows ianao ary izany no antony hamerenanao azy. , ary any no ilazanao azy ireo fa araka ny andininy 1 amin'ny lalàm-pifaninanana dia tsy ara-dalàna ny fampiasan'izy ireo anao mividy vokatra iray nefa tsy azonao atao ny mamerina azy io hametraka iray hafa. Ary satria izany rehetra izany dia atao ao anatin'ny 7 andro aorian'ny fividianana, raha tsy izany dia averinao amin'ny fivarotana ilay solosaina finday.
Raha vantany vao mahazo ny mailaka miaraka amin'ireo endrika fenoina ianao dia efa manana porofo ny fanekena ny fiverenana ianao ary manohy fotsiny ny fomba. Ara-dalàna raha mihemotra be ny zava-drehetra amin'ny fahavaratra, izany dia mitranga amin'ny orinasa rehetra noho ny fialantsasatra iray volana an'ny mpiasan'izy ireo.
Tamin'ny farany dia nandoa ahy tamin'ny zoma izy ireo. Ny zava-mitranga dia izany na nijery kaonty hafa aho ary tsy hitako ny mijery ilay nasiako taratasy.
Mila milaza aho fa tena faly amin'ny ASUS amin'ity lafiny ity amin'ny fanarahana ny fari-pitsipika EU.
Izany hoe, raha tsy maharesy lahatra ahy ny solosaina finday ... natambatra ny bateria ary maharitra kely, manodidina ny 3 ora. Mba hanesorana ny kapila mafy dia tsy maintsy disorinao daholo ny zava-drehetra, ary manelingelina ahy be io. Ao amin'ny Dell taloha, ny fanesorana visy fotsiny dia namoaka ilay kapila mafy.
Manana Ubuntu 15.04 napetraka aho ary ny marina dia tonga lafatra ny zava-drehetra.
Tsy misy olana amin'ny BIOS. Mazava ho azy, tsy tiako ny zava-misy fa ny OS dia tafiditra ao amin'ny BIOS.
Nahazo marimarina aho, satria nolazaiko azy ireo fa mifanohitra ny fampahalalana nomeny ahy. Izaho koa dia nanana 8.1, ary nangataka ahy izy ireo hampandeha ilay fahazoan-dàlana. Nandà tamim-pahatsorana aho, nanazava ny zavatra hampiasaiko, Ubuntu, ary nangataka azy ireo aho mba alefaso amiko ireo taratasy nalefan'izy ireo tamin'ny mpampiasa hafa hangataka famerenam-bola.
Tsy nanazava tamiko izy ireo fa satria io dia 8.1 no tokony hampiasako azy fa tsy amin'ny hafa. Tamin'ny farany dia nandà aho, nameno ireo takelaka, nandefa azy ireo ary naverin'izy ireo tamiko.
Manantena aho fa ny mpampiasa nanaiky ny fahazoan-dàlana dia hamerina azy ihany koa.
Androany no hamolavolako ny kapila tany am-boalohany ary ho hitantsika raha hivarotra azy aho na hitahiry izany ho an'ny backup, satria ny SSD ihany no ampiasako.
Auqneu amin'ny tranga misy ahy hanesorana ny kapila very ny fiantohana. Fantatro. Fa aleoko mandray ny risika ary manana SSD toy izay mampiasa HD. Hatramin'ny nanandramako ireo kapila ireo dia tsy nampiasa hafa intsony aho.
Miarahaba sy misaotra an'ireo torohevitra
Roberto?, Maninona no ampiasainao ny karatra fahatsiarovana SDD…. Raha tokony ho ny HDD?, Tsy azoko izany, azafady ny tsy fahalalako azy, milaza ianao fa manana solosaina findainy Asus ianao, izay nesorinao ny Hard Drive ary amin'ny solony dia mampiasa ny SDD ianao.
Inona no tombony sy fatiantoka ananan'ny SDD raha oharina amin'ny HDD? Ahoana no fomba nanaovanao ny fifandraisana tamin'ny alàlan'ny fitaovana sa nampiasa fitaovana ivelany hafa ianao fa ity ilay pc?
Ahoana no naneren'izy ireo anao hanaiky ny lisansa? Tsy mety izany, mitandrema satria ny orinasa rehetra dia manakarama olona izay tsy manam-bola handoa azy ireo ny karama farany ambany na ambany. Tokony tsy nanaiky ny fahazoan-dàlana mihitsy ianao, ho bebe kokoa. Na izany na tsy izany, mamela anao hamerina ilay vokatra ao anatin'ny 7 andro aorian'ny fividianana ny lalàna.
Na izany na tsy izany, eritrereto fa naharitra 3 herinandro aho tamin'ny volana Mey, ankehitriny ny orinasa rehetra dia vitsy kokoa ny mpiasa satria tsy maintsy ahodin'izy ireo mandritra ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra, noho izany dia lojika fa hitondra anao in-droa ianao raha ny antsasaky ny mpiasa dia nandany ny fahavaratra. tamin'ny volana jolay ary ny antsasaky ny volana aogositra, na latsaka raha mihodina eo anelanelan'ny 15 jona sy 15 septambra mandritra ny 3 volana.
gerop dia hoy izy:
Tsy dia tiako loatra ny fananan'ny Microsoft tanany tànana amin'ireo mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny rafitra Windows 8.1 OEM 64-bit napetraka tao amin'ny Asus, noferan'izy ireo amin'ny fampiasana manokana ny windows fotsiny izy ireo, ary ambonin'izany dia feno dokambarotra izy ireo. mihantona ny pejy satria tsy manana taratasy fanamarinana fiarovana.
Rehefa afaka iray volana sy tapany dia nantsoiko ny mpanamboatra hamerina ahy ny sandan'ny lisansa windows, ary nilaza izy ireo fa afaka mahavita hatramin'ny 30 andro, aorian'io fe-potoana io dia tsy afaka nanao na inona na inona izy ireo, tonce hoy aho hanome ahy kopia na ny mombamomba ny fahazoan-dàlana ProduKey an'ny fahazoan-dàlana windows (tsy tonga na aiza na aiza amin'ny faritra ara-batana amin'ny solosaina) ary nilaza izy ireo fa tsy nahalala na inona na inona izy ireo, na izany na tsy izany dia nilaza fa "lakile" dia apetraka an-tsokosoko ao amin'ny UEFI / BIOS fizarana vaovao amin'ny motherboard ... ny kapila mafy sy ny rafitra mitovy. Fantaro ihany koa ny fiantohana, ary nilaza izy ireo fa ny fiantohana ihany no manarona satria nandefa ny rindrambaiko napetraka sy ny tsy fahombiazana ara-teknika (saingy tsy maintsy aloa), raha tsy izany dia tsy nandrakotra na inona na inona raha toa ka nisy fanodikodinam-bola na anomaly toy ny rafitra hafa ao amin'ny solosaina findainy. Iza no nanetsika windows? Ity laptop ity dia naseho ampahibemaso tao amin'ny fivarotana iray, satria nolazain'izy ireo tamiko fa tsy misy intsony, tonce hoy aho fa very ny fitaovana hahafantarana ny toe-javatra misy azy ireo, heveriko fa tamin'io fotoana io dia nihetsika izy ireo ny varavarankely »Satria rehefa tonga tany an-trano aho ary namadika ny solosaina dia efa navadika ny varavarankely.
Taorian'ny fikarohana nandritra ny volana vitsivitsy, satria natahorana ny fiantohana, dia nanapa-kevitra ny hanandrana ny Linux Mint miaraka amina boot UEFI azo alain-tahaka aho, manao fametrahana madio ny rafitra tokana ary mamolavola ilay kapila mafy iray manontolo, dia niasa toy ny manintona io.
Mamaly an'i gerop
Jesus Maria Berrueta dia hoy izy:
Te-hanome hevitra aho fa nahazo famerenam-bola aho andro vitsivitsy lasa izay (Desambra 2015) ho an'ny solosaina finday ASUS misy windows 8.1, ary nangataka ahy izy ireo hihetsika. Izany hoe, ekeo ny fehezan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana ary ampodio avy eo ny windows amin'ny Internet. Ny fanazavana nomen'izy ireo ahy dia ilaina izany mba hahafahana mahazo "lakile" Windows, satria tsy ilaina ny mandefa sticker na famantarana ara-batana hafa, satria ny lakilen'ny vokatra dia mipetraka ao amin'ny BIOS an'ny solosaina.
Taorian'ny famenoana ireo endrika roa nalefa tamiko tamin'ny alàlan'ny mailaka dia azoko ny 42 euro tao anatin'ny andro vitsivitsy. 10 ho an'ny ASUS amin'ity lafiny ity.
Valiny tamin'i Jesús María Berrueta
Tsy nanontany ahy izy ireo fa raha izany dia maneho hevitra fa azonao atao ity lakile ity amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny GNU / Linux Live avy amin'ny USB na CD miaraka amin'ity baiko manaraka ity avy amin'ny terminal:
sudo cat / sys / firmware / acpi / tables / MSDM
Azonao atao ny mahazo ny lakile amin'ity endrika ity izay ny YYYY… no lakilen'ny vokatra tadiavinao:
Tsy tadidiny hoe avy taiza izy no nahazo ilay baiko, fa mitady indray ny loharano http://www.sysadmit.com/2015/07/windows-uefi-bios-ver-clave-guardada.html ary manome baiko hafa izy ireo hahita izany:
sudo xxd / sys / firmware / acpi / tables / MSDM
sudo hd / sys / firmware / acpi / tables / MSDM
Ny rehetra dia niasa lavorary ho ahy fa ny faharoa kosa tsara kokoa satria tao amin'ilay voalohany dia nifanindry amina toetra hafahafa ilay litera voalohany an'ny teny miafina.
WPS Office alpha 18 64-maritrano kely
Gedit dia niova ho IDE